Wechidiki Erihu anotangawo kutaura (1-22)
Anotsamwira Jobho nevamwe vake (2, 3)
Haana kutanga kutaura nekuti aivaremekedza (6, 7)
Zera rega harisi iro rinoita kuti munhu achenjere (9)
Erihu ane shungu dzekutaura (18-20)
32 Saka varume vatatu ava vakarega kuedza kupindura Jobho, nekuti akanga achizviti akarurama.*+ 2 Asi Erihu mwanakomana waBharakeri muBhuzi+ wemhuri yaRamu akagumbuka kwazvo. Akashatirirwa Jobho nekuti aiedza kuzviita akarurama pane kuti Mwari ndiye akarurama.+ 3 Akatsamwirawo shamwari dzaJobho nhatu nekuti dzakanga dzisina kuwana mhinduro asi dzakanga dzati Mwari akaipa.+ 4 Erihu akanga akamirira kupindura Jobho, nekuti vakanga vari vakuru kwaari.+ 5 Erihu paakaona kuti varume vacho vatatu vakanga vasisina zvekumupindura, hasha dzake dzakawedzera. 6 Saka Erihu mwanakomana waBharakeri muBhuzi akatanga kutaura achiti: “Ndiri mudikiAsi imi varume mava vakuru.+ Saka ndakamira kutaura ndichikuremekedzai,+Uye ndakazeza kukuudzai zvandinoziva. 7 Ndakafunga kuti, ‘Regai zera ritaure,*Uye regai makore mazhinji azivise uchenjeri.’ 8 Asi mweya* uri muvanhu,Kufema kweWemasimbaose, ndiwo unovapa kunzwisisa.+ 9 Zera rega harisi iro rinoita* kuti munhu achenjere,Uye vakwegura havasi ivo vega vanonzwisisa zvakarurama.+ 10 Saka ndiri kuti, ‘Nditeererei,Ndikuudzeiwo zvandinoziva.’ 11 Onai! Ndanga ndakamirira mashoko enyu;Ndanga ndichingoteerera muchitaura pfungwa dzenyu,+Muchitsvaga zvekutaura.+ 12 Ndanga ndakanyatsokuteererai,Asi hapana kana mumwe wenyu aratidza Jobho kuti akarasika*Kana kumupindura zvaari kutaura. 13 Saka musati, ‘Tawana uchenjeri;Mwari ndiye anomutsiura, kwete munhu.’ 14 Haana kutaura mashoko ake kwandiri,Saka handisi kuzomupindura nemashoko enyu. 15 Vavhundutswa, havasisina zvimwe zvekupindura;Havasisina zvimwe zvekutaura. 16 Ndanga ndakamirira, asi havachatauri;Vangomira apo, vasisina chekupindura. 17 Saka iniwo ndichapindura;Ndichataurawo zvandinoziva, 18 Nekuti ndazara nemashoko;Mweya* uri mandiri uri kundimanikidza. 19 Mukati mangu muri kuita sewaini isina pekufema napo,Sehomwe itsva dzewaini dzava kuda kuputika.+ 20 Regai nditaure kuti ndirerukirwe! Ndichashama miromo yangu ndokupai mhinduro. 21 Handina munhu wandichasarura;+Uye handizorumbidzi munhu zvekuda kumufadza,* 22 Nekuti handigoni kurumbidza munhu zvekuda kumufadza;Kana ndikadaro, Muiti wangu angakurumidza kundibvisa.
^ Kana kuti “aizviona seakarurama.”
^ ChiHeb., “mazuva ataure.”
^ Kana kuti “Mazuva mazhinji haasi iwo ega anoita.”
^ Kana kuti “atsiura Jobho.”
^ Kana kuti “handizopi munhu zita rekuremekedza.”